Human Papillomavirus ee Ragga | Ragga Stylish
Human Papillomavirus ee Ragga
Fayraska Papilloma-ka Aadanaha ee HPV waa mid ka mid ah infekshannada ugu badan ee galmada lagu kala qaado. Sida caadiga ah iyo qiyaas ahaan 80% ay sameysay caafimaadka bulshada ee UK, waa nin galmo firfircoon Waqti ka mid ah noloshaada waxaad ku dhex mari doontaa cudurka noocan ah.
Ma dhayalsan karno cudurkan galmada lagu kala qaado, maadaama uu ka mid yahay kuwa ugu badan iyo waxay u horseedi kartaa kansarro kala duwan, oo ay ku jiraan kansarka dabada ee saameeya 84% kiisaska, kansarka guska oo ka muuqda 47% iyo kansarka afka iyo cunaha.
1 Cudurka 'papillomavirus' ee aadanuhu ma sahlana in la ogaado
2 Sidee loo qaadaa oo waa maxay astaamahiisa?
3 Noocyada burooyinka xubnaha taranka
4 Ma jiraa daawo lagu daaweeyo papillomavirus-ka aadanaha?
5 Dadkee ayaa ugu nugul HPV?
Cudurka 'papillomavirus' ee aadanuhu ma sahlana in la ogaado
Waqtigan xaadirka ah ma jiro baaritaan tijaabo ah oo lagu ogaanayo fayraskan waana sababtaas way adagtahay in la ogaado. Waxaa dhacda in noocyada halista ugu weyn ee fayraska aysan bixin astaamo nooc kasta oo ay yihiin iyo waxay adkeynaysaa qiimeyntaada.
Sidaas oo kale kuma dhacdo dumarka, halkaasoo aad ka qaadi karto shaybaarka unugyada makaanka afkiisa, oo loogu yeero waxa loogu yeero Pap smear ama Pap test. Baaritaankaan, waxaa suurtagal ah in lagu arko haddii ay jiraan unugyo la xiriira kansarka iyadoo la falanqeynayo DNAdooda.
Sidee loo qaadaa oo waa maxay astaamahiisa?
Sawir laga soo qaaday daryeelka
Ragga way awoodaan HPV laga qaado galmada, xaaladdan oo uu ku qaadsiiyo qof horey u qaaday cudurka. Galmada dabada, siilka ama afka ama qaab kale halka ay ku lug leedahay taabashada maqaarku waa ku filan tahay inaad awood u yeelato gudbinta HPV.
Ragga badankood wax calaamado ah malahan markii ay cudurka qaadaan iyo xaalado badan infekshankan ayaa iskood isaga tagta. Si kastaba ha noqotee, marka aysan tagin waa goorma burooyinka xubnaha taranka waxay bilaabaan inay soo muuqdaan, taas oo tilmaam u noqon karta nooc ka mid ah kansarka.
Waa in lagu soo gabagabeeyo infekshanka HPV lama mid aha kansarka qaba, Laakiin waxay soo saari kartaa noocyo isbeddello ah oo jidhka ah oo ay keento inay dhacaan. Waa la horumarin karaa kansarka futada, kansarka guska ama kansar ku leeyahay dhabarka dambe cunaha, carrabka, ama qumanka. Waxa jira dad ku dhaca infakshankan oo, sidaan dib u eegnay, iskood ayey u baaba'aan, laakiin xaaladaha kale waxaa laga yaabaa inay si tartiib tartiib ah u kobcaan oo sanado ka dib ama xitaa tobanaan sano aan la ogaanin.
Noocyada burooyinka xubnaha taranka
Burooyinku badanaa waxay u muuqdaan sidii buro yaryar ama koox buurbuur ah. Qaarkood way yar yihiin, qaarna waa weyn yihiin, waa fidsan yihiin, weynaanayaan, ama qaabab-qaabeed iyo muuqaal ah agagaarka guska ama dabada. Waxay noqon karaan kuwo taagan ama sii siyaada kolba waqtiga ka dambeeya. Xaaladaha badankood looma tixgeliyo inay yihiin kuwo khatar badan oo aan waxyeello daran u geysan, sidaas darteed way baaba'i karaan muddo laba sano ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ay dhacdo wax calaamado ah, waxaa lagama maarmaan ah in loo jeesto dhakhtarka si goor hore loogu fiirsado.
Ma jiraa daawo lagu daaweeyo papillomavirus-ka aadanaha?
Ma jiro daaweyn gaar ah oo loogu talagalay papillomavirus aadanaha, laakiin waxaa jira daaweyn loogu talagalay astaamaha keena. Dhakhtarka lasocda daaweyntu wuxuu sameyn doonaa baaritaan laxiriira kansarka suuragalka ah, goorta hore ee baaritaanka la sameeyo, waxay u badan tahay inay xalin doonto dhibaatada
Xaaladda burooyinka xubnaha taranka, waxaa jira daaweyn iyada oo ku saleysan kareemada, looshanno kiimiko ah, halkaas oo burooyinka la baabi'in doono oo la waayi doono. Haddii ay dhacdo in daaweynta noocan ah aysan shaqeyn, waxaa looga saari doonaa qalliin ama qabow ama gubasho.
Dadkee ayaa ugu nugul HPV?
Waxaa jira dad ka nugul dadka kale tanina waxay badanaa ku dhacdaa ragga con hababka difaaca jirka oo daciifa. Haddii ay qaadaan infekshankan, waxay lahaan karaan dhibaatooyin caafimaad oo ka dhashay iyo xitaa kansar ay ku abuurtay daciifnimo noocaas ah.
Si loo yareeyo fursadaha qaadista fayraskan waxaa jira tallaal, tallaabo badbaado leh oo wax ku ool ah oo waliba ragga ka ilaalinaysa inuu ku dhaco cudurka HPV. Waxaa lagu talinayaa in la tallaalo carruurta da'doodu tahay 11 ama 12 si ay uga badbaadaan kansarka mustaqbalka ee fayraska.
Dhinaca kale, mid ka mid ah tallaabooyinka ugu fiican ayaa noqon lahaa isticmaalka cinjirka galmada Markay galmoodaan, nooc kastoo ay ahaadaanba. Nidaamkan waxaad hubineysaa inaadan qabin wax cudur ah oo galmada lagu kala qaado.
Gabagabadii, papillomavirus-ka bini-aadamka ee ragga badanaa waa ku meel gaar. Qofku wuu qaadi karaa sanado mana kuu keenayo dhibaatooyin caafimaad. Haddii aad leedahay lammaane oo midkood uu cudurka ku dhacay, lama ogaan karo inta ay la eg tahay, mana aha wax la mid ah labada qof ee uu la xiriiray dadka kale. Waxaa muhiim ah in xaqiiqadan ka hor dhibaatada laga wada hadlo oo xal deg deg ah la raadiyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Human Papillomavirus ee Ragga